အချင်းနဲ့ ချက်ကြိုးဖြစ်လာချိန်မှာ သန္ဓေသားဟာ ဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီလဲ? – BurmeseHearts
သားအိမ်အတွင်းတွယ်ကပ်ပြီး အချင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရက်သတ္တပတ် (၈)ပတ်အတွင်းမှာ သန္ဓေသားလောင်းဟာ လက်ချောင်း ၊ခြေချောင်း ၊မျက်လုံး ၊ နှာခေါင်း ၊ နားတို့ဟာ ပီပြင်လာပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် အကြမ်းဖျင်းနှင့် အာရုံကြောဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်အထိ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အချင်းနဲ့ ချက်ကြိုးဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်တာလဲ?
BurmeseHearts	 Jan 18, 2017 0
စောစော စာသင်ပေးလို့ တဘဝလုံးစာ တော်သွားခြင်းမဟုတ်
ကလေးမီးဖွားပြီးစမိခင်တွေ ဘာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တတ်သလဲ?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ?